Pejy fandokoana mandala ho an'ny olon-dehibe - pejy fandokoana maimaim-poana
Mandala fandokoana ho an'ny olon-dehibe
Raha mijery ny natiora ianao dia afaka mahita mandala na aiza na aiza. Ohatra amin'ny voninkazo, peratra hazo, felam-panala, amin'ny alàlan'ny vatokely izay hatsipy ao anaty rano sy faribolana.
Mandalas ho an'ny olon-dehibe
Mandalas manampy amin'ny fidirana eto ary ankehitriny. Mifantoka tanteraka amin'izay ataonao. Mifantoka amin'ny fandokoana ianao, tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny fifantohana izany fa mampitony ny saina ihany koa.
Amin'ny fipihana ny mandala, misokatra amin'ny endrika PDF ny modely:
Jereo ny mandala olon-dehibe ho sary